Booliska Bosaaso oo qabtay 113-Tahriibeyaal ah(Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Booliska Bosaaso oo qabtay 113-Tahriibeyaal ah(Sawiro)
Tagged With: Tahriib
Booliska Bosaaso oo qabtay 113-Tahriibeyaal ah(Sawiro)
April 16, 2010 - By: Abdirahman. A
Ciidamada Amniga ee magaalada Bosaaso ayaa habeenimadi xalay ku guuleystay in ay soo qabtaan ilaa 113-qof oo tahriibeyaal ah kuwaas oo laga soo qabtay degaanada ku dhow magaalada Bosaaso oo kala ah Dhagcaan, Qow iyo Ceelaayo kuwaas oo doonaayay in ay u tahriibaan dalka Yemen.
Subaxnimadii maanta ayaa Saxaafadda loo soo bandhigay Tahriibeyaasha lasoo qabtay oo lagu soo aruurshey, Saldhiga Bartamaha ee magaalada,waxaana ka dib Shir Jira’id ku qabtay goobta si wadajir ah Wasiirka Amniga Puntland Jenraal Yuusuf Axmed Kheyr,Gudoomiyaha gobolka Bari Sheikh C/xaafid Cali Yuusuf iyo Duqa magaalada Bosaaso Maxamuud Faarax Beeldaaje.
Duqa magaalada Bosaaso ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid socday maalmihi lasoo dhaafay oo laga hortagaayay in dadka tahriib doonka ay ka ambaxaan xeebaha gobolka Bari ayadoo u xusay in ay si socon doonto.
Dhegayso Warka Duqa magaalada Bosaso:
Gudoomiyaha gobolka Bari Sheikh C/xaafid Cali Yuusuf ayaa halkaasi ka sheegay in dadkaasi dib loogu celin doono goobaha ay ka yimaadeen isla markaana mahadcelin usoo jeediyey Ciidanka howlgalka sameeyey ee gacanta kusoo dhigay.
Dhegayso warka Gudoomiyaha:
Wasiirka Amniga Dowlada Puntland Jenraal Yuusuf Axmed Kheyr ayaa halkaas ka xusay in Xukuumada Puntland ay waqtigaan ka go’aantahay la dagaalanka Tahriibka isla markaana sheegay in dadkaasi si nabad ah la geyn doono halka ay ka yimaadeen marki hore.
Dheyagso Warka Wasiirka:
Qaar ka mid ah Tahriibeyaasha lasoo qabtay oo ay Saxaafada la kulantay ayaa waxaa ay sheegeen in si fiican loola dhaqmay,waxaana ay isugu jireen rag iyo dumar iyadoo qaar ka mid ah ay soo dhoweeyeen in ay dib ugu laabtaan dhulkoodi Hooyo.
Dhegayso nin Itoobiyaan ah oo ka waramaaya danta ay u tahriibayaan iyo sida loo qabtey
Dhowr maalmood ka hor Ciidamada Amniga magaalada Garoowe ayaa iyaguna qabtay 21-qof tahriibeyaal Soomaali ah kuwaas oo doonaayay in ay usoo gudbaan magaalada Bosaaso si ay uga tahriibaan oo ay aadan dalka Yemen.
C/salaan Axmed Shire